musha South AMERICA FOOTBALL STORies Columbian Nhabvu Vatambi Duvan Zapata Zvekuchecheche Nyaya Plus Untold Biography Facts
Kutanga, zita rake rekuti "The Big Panther". Tinokupa yakakwana kuzere yeDuvan Zapata's Childhood Nhau, Biography, Mhuri Chokwadi, Vabereki, Upenyu hwepakutanga uye zvimwe zviitiko zvakakurumbira kubva paakange achiri mwana kusvika pakuzivikanwa.
Hupenyu nekusimuka kwaDuvan Zapata. Mifananidzo Credits: Semana uye Chinangwa.
Ehe, munhu wese anoziva Zapata nekumhanyisa, muviri uye ziso rake rakakura rekurova zvinangwa. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanoona shanduro yedu yeDuvan Zapata's Biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino pasina imwezvezve ado, ngatitangei.
Duvan Zapata Mwana WeChinyorwa- Upenyu Hwekutanga uye Mhuri
Kutanga, Duvan Esteban yekwaZapata Banguero akazvarwa pazuva rekutanga raKubvumbi 1 paRafael Uribe kiriniki muCali, Colombia. Ndiye wechipiri pavana vaviri akazvarwa kuna amai vake, Late Elfa Cely Banguero uye kuna baba vake, Luis Oliver Zapata. Pazasi pane pikicha isiri yevabereki vanodiwa vaDuvan Zapata.
Sangana nevabereki vaDuvan Zapata- amai vake, Late Elfa Cely Banguero uye kuna baba vake, Luis Oliver Zapata. Mifananidzo Credits: Semana.
Duvan Zapata's Family Background: Wakanga uchiziva here kuti iyo nhabvu nhabvu inyanzvi yeColumban yemadzinza akasanganiswa neAfro-American mhuri yekutanga? Muchokwadi, vabereki vaDuvan Zapata vakamurera munharaunda yeCórdoba yedunhu reAguablanca, kuCali kwaakakurira pamwe chete nasisi vake mukuru Cindy Carolina.
Mufananidzo wakanaka waDuvan Zapata Wekukura Kwemwana- Akakurira kuCordoba kuCali. Mufananidzo Wemifananidzo: Semana.
Duvan Zapata Hwepakutanga Hupenyu: Kukura muCórdoba, mudiki Duvan akatanga kutamba nhabvu mumugwagwa wakasipfuura weCali pakanga paine imba yake. Achiri mudiki aive ipapo, airota kuva mutambi wenhabvu ane mukurumbira, kwete mukurumbira kana hupfumi hunoshamisa asi kuti akwanise kutenga PlayStation!
Duvan Zapata Mwana WeChinyorwa- Dzidzo neKubata Buildup
Pakazosvika nguva Duván aine makore gumi nematatu, tarenda rake renhabvu rakanga ratove pachena kuva vabereki vake vaiona zvakakodzera kuti chikoro chake cheLiceo Superior del Valle muCiudad Córdoba chinofanira kuenda pamwe nehunyanzvi hwekuvaka bhora mubhola.
At 11, Duvan anga atova nemutambo wemitambo uye akagadzirira kutanga basa rekuvaka munhabvu. Mufananidzo Wemifananidzo: Semana.
Nekudaro, wechigumi nematanhatu Duván mushure mekutsvaga mvumo yevabereki vake akabvumidzwa kunyoresa mukamuri revakomana vepo América de Cali muna 6. Paaive munharaunda yekirabhu, Duvan akakura musimba, hunyanzvi uye kukwirira zvekuti anga atove akamira murefu pa2002m paakange aine makore gumi nematanhatu pagore ra1.86.
Duvan Zapata Mwana WeChinyorwa- Basa Rokutanga Upenyu
Paive kuAmérica de Cali uko Duvan akasimuka nepakati, akatendeukira kuhunyanzvi uye akatopenengura chibodzwa chake chekunakidzwa nemurairidzi wake - Diego Umaña - uyo akange ambomupa mukana wekudzidzira pamwe neye mukuru weclub. Duván akaridzira América de Cali kwemimwe mwaka miviri (2009/2010 & 2010/2011) asati akweretwa kudivi reArgentina - Estudiantes uko zvakare akahwina padutavhu rake.
Kukwira kuburikidza nemazita: Unogona kumuona iye nevatambi vechikwata cheAmérica de Cali? Mufananidzo Wemifananidzo: Semana.
Kurudziro yenhabvu yakaenderera mberi ichinyora kuwedzera kukuru kwezvinangwa pachine nguva nenguva zvichionekwa pamwe nechikwata chechengeti checlub. Nekudaro, Estudiantes akatenga hafu yekodzero dzake dzekutamba kubva kuAmérica de Cali achangotanga kukwezva kufarira kubva kumakirabhu epamusoro-soro eEuropean kusanganisira West Ham uyo aive pedyo nekumusayina asi akakanda mapfumo pasi nekuti vaisakwanisa kumuwanira mvumo yekushanda. Mufaro wemhuri yaDuvan Zapata waisaziva miganhu panguva iyo kirabhu yeItaly, Napoli yakamubatsira kuchengetedza vhiza yeChinese kuti auye kuzovatamba.
Duvan yekwaZapata Biography- Mugwagwa Mukurumbira Nhau
Duvan uyo akazotengwa neIitalian Side Napoli, haana kuwana mukana wakanaka wekuzviratidza kunyangwe aive mumwe wechirabhu anodhura zvakanyanya panguva iyoyo. Chaizvoizvo, iye waNapoli uyo-ndiye mudzidzisi Rafa Benitez aigaro taura kuti Duvan akakosha kuchikwata asi kurova kwevatambi nguva yekutamba kwakaratidza zvinopesana.
Napoli ndiko kwaakatanga kusangana nekushushikana achitamba nhabvu yepamusoro. Mufananidzo Wekadhi: Chinangwa.
Saka, hazvina kushamisa izvozvo Naples akakweretesa Duvan kuUdinese kwaakatambura fomu isina kugadzikana nekuda kwekukuvara. Kana neniwo Dhavan aive asina kufadza pachikwereti paSampdoria kwaaive achiri kure nekuzadzisa kugona kwake. Muchokwadi, Duvan akagamuchira kudanwa kuColombia's preliminary squid for 2018 World Cup asi haana kuita kuti akacheka kumutambo wekupedzisira nekuda kwezvikonzero zviri pachena.
Duvan yekwaZapata Biography- Kumuka Mukurumbira Nhau
Seka phoenix inokwira kubva pamadota ayo, Duvan akatanga kuratidza kugona kwake kuzere Atlanta, kirabhu yaakatengeserwa naSampdoria mushure mekunge chikamu chemuItaly chasarudza kuti haachadikanwa.
NeZvinangwa mushure mezvinangwa, Duvan akazvimisikidza semutambi wepamusoro weSerie A ligi pamwe chete Cristiano Ronaldo panguva yake yekubuda! Akatobatsira Atalanta kusvika iyo 2019 Coppa Italia Final uye kuwana wechitatu-nzvimbo kupera muSerie A. Vamwe, sezvavanotaura, inhoroondo.
Ona kuti ndiani akagovana mubairo naChristiano Ronaldo. Mufananidzo Wemifananidzo: Instagram.
Duvan Zapata Mukadzi nevana
Achienderera mberi kune hupenyu hwemhuri yaDuvan Zapata, akaroora musikana wake akatendeuka - Nana Montaño uye ane zvakawanda zvakanaka zvezvinhu zvinomuitira muhupenyu hwake hwewanano. Vaviri vacho vakasangana kuseri mu2012 kuCali apo Duvan airidzira kune rimwe divi reArgentantes reArgentina. Nana aidzidza kuyunivhesiti achidzidza Psychology panguva iyoyo. Vakadanana kwamakore mashoma gare gare uye vakatora hukama hwavo kune hunotevera chikamu nekuroora makore gare gare.
Sangana nemukadzi waDuvan Zapata. Vanotaridzika zvakanaka kune mumwe nemumwe, handizvo here? Mufananidzo Wemifananidzo: Instagram.
Nana aive mukadzi ainyatsoziva kuchengeta murume wake! Saka nekudaro, hapana zvinyorwa zveDuvan aine vamwe vasikana panguva iyo yaaidanana nemukadzi uyo anozove mukadzi wake. Vaviri vacho vabereki kuvana vaviri vakanaka panguva yekunyora iyi bio. Ivo vanosanganisira Dantzel (mwanasikana) uye Dayton (mwanakomana).
Mufananidzo waDuvan Zapata nemukadzi wake nevana Dantzel & Dayton. Mufananidzo Wemifananidzo: Instagram.
Duvan Zapata Chokwadi chemhuri uye Hupenyu
Ndiani Duvan Zapata asina mhuri uye angadai akazove ani kana mubereki wake uye hama yake anga asipo kwaari kubva pakutanga? Tinokuunzira chokwadi pamusoro pemhuri yemhuri yaDuvan Zapata kutanga nevabereki vake.
Pamusoro pababa vaDuvan Zapata: Luis Oliver Zapata ndiye baba venhabvu nyanzvi. Akazvarirwa muKorinde, Columbia uye akakurira kuTetillo. Hongu, Zapata aive baba vane rudo uye vanotsigira, akasimudza Duvan kuti ave mwana anoteerera uye anoremekedza uye akava nechokwadi chekuti anodzikamisa vadzidzi vemitambo nekutamba nhabvu. Chiizve? Luis haana kumbopotsa kutora Duvan kudzidziswa panguva yebasa rake rekuvaka. Luis parizvino anoita basa rakakosha pakudiridza mwanakomana wake mumwe chete pane zvinodiwa kuti arambe akatarisana uye arambe achizvininipisa.
Mufananidzo usingawanzoonekwe waLuis achifarira zororo rinodhura nerubatsiro rwemabasa emwanakomana wake. Mufananidzo Wekodhi: WTFoot.
About amai vaDuvan Zapata: Late Elfa Cely Banguero Duvan Zapata's mom. Akazvarwa muPadilla, Columbia uye zvakare akakurira kuTetillo kwaakasangana nababa vaDuvan. Semurume wake Luis, Elfa akabatsira pakukwira kwemwanakomana wake mumwechete. Muchokwadi, anonzi akatora Duvan ane makore gumi nemaviri ekuedza kuedza kuzviita vakomana yekirabhu América de Cali. Zvinosuruvarisa kuti haana kuzomborarama kwenguva yakareba kuti anakirwe nemuchero webasa rake paakadonha uye akafa muna June 11. Kunyangwe rufu rwake rwakanzwikwa zvakanyanya naDuvan, akazvigadzirira munguva shoma uye akaita danho rekukudza ndangariro dzaamai vake na kugara wakatarisa kunhabvu.
Sangana naDuvan Zapata's Mum: Iye akafanana nevamwe kwete: Ndangariro dzaElfa Cely Banguero dzichazotarisirwa nekusingaperi mumoyo wemwanakomana wake Duvan. Mufananidzo Wemifananidzo: Semana.
About hama dzaDuvan Zapata: Unoziva here kuti Duvan haana hama asi hanzvadzi iri hama yake yakura. Mukadzi anozivikanwa saCindy Carolina akakurira naDuvan uye agara ari pedyo naye kubva paupenyu hwake hwepakutanga kusvika zvino. Zvinonakidza kucherechedza kuti ivo vaviri vanogovana svosve neshasha yenhabvu uye vanochengeta nzira dzekukurukurirana dzakazaruka zvisinei nekuti ivo mamaira akaparadzaniswa.
Sangana naDuvan Zapata's Sista- Cindy Carolina. Ivo vaviri vakakura pamwe chete uye vachiri kugovana chisungo chepedyo. Mufananidzo Wemifananidzo: Semana.
Nezve hama dzaDuvan Zapata: Kure neupenyu hwepapo kwaDuvan Zapata, hapana zvakawanda zvinozivikanwa nezve madzitateguru ake nemhuri dzemhuri maererano nezvavanasekuru nasekuru vake. Kutenda kune mumwe wevabereki vaDuvan Zapata, ane hukama naCristian Zapata anova hama yake. Cristian anotamba Serie A kudivi reGenoa, kwete zvakawanda anozivikanwa nezve babamunini uye bababamunini ivo vazukuru vake, babamunini uye vazukuru vake vachiri kuzozivikanwa panguva yekunyora iyi biography.
Sangana naDuvan hama yakakurumbira muzukuru Cristian Zapata. Mufananidzo Chikwereti: Transfermarket.
Duvan yekwaZapata Biography-Personal Life Facts
Nzvimbo yaDuvan Zapata semunhu anorova kwazvo inokwikwidza - uyezve kuitwa nani - nehunhu hukuru hunotsanangurwa nehunhu hweAries Zodiac chiratidzo. Iye anozvininipisa, anesimba, anonakidza-ane rudo, anoshingairira, anodada uye akasvinurira kuburitsa chokwadi pamusoro peakavanzika ake uye echokwadi munhu.
Chero iye anenge achirovera asiri kudzidzisa kana kutamba nhabvu, anotora zviitiko zvishoma zvakawandisa zvakatariswa sekufarira kwake. Zvinosanganisira kufamba, kushambira, kutamba mitambo yemavhidhiyo uye kushandisa nguva yakanaka nemhuri yake neshamwari.
Ndiani asingade munhu anonakidzwa? Mufananidzo Wemifananidzo: Instagram.
Duvan yekwaZapata Biography- Lifestyle Facts
Nezve maitiro aDuvan Zapata uye anoshandisa mari yake, ane mari inofungidzirwa inoita $ 1M panguva yekunyora. Kuwanda kwehupfumi hwemutambi kune masosi akasimbiswa mumiripo uye mibairo yaanotambira yekutamba nhabvu yepamusoro nhabvu apo endorsements inopa chunk yakakosha kuhupfumi hwake huri kuwedzera.
Nekudaro, munhu anorova anotsigira kurarama hupenyu hwoumbozha hwaunofarirwa nevaFara nevavengi. Uchapupu hwekugara zvakanaka kwaDuvan hunosanganisira kugona kwake kutyaira mota dzakasarudzika pamwe nekugara mudzimba dzinodhura nemafurati.
Kuongororwa kwepedyo kweiyo inomhanya-mhanyisa speedometer kunoratidza Duvan anofamba mune Mini Cooper. Ndosaka mwana mukomana aida selfie naye. Mufananidzo Wekodhi: WTFoot.
Duvan yekwaZapata Biography- Chokwadi Chisingabvumirwe
Kuputira nyaya yedu yehupi yaDuvan Zapata uye biography pano zvishoma zvinozivikanwa kana kusataurika chokwadi pamusoro peanorova.
Chokwadi # 1: Mari Yemubhadharo Kuputsa: Senge panguva yekunyora, kondirakiti yechibvumirano neAtlanta BC inomuona achitora mubhadharo wecomputer ye € 4,680,000 pagore. Kupwanya mubairo waDuvan Zapata muhuwandu hwakadzika, isu tine zvinotevera;
SALARI MUNOGONA KUPESA STERLING
PER Year $5,122,377 € 4,680,000 £ 3,970,867
PAMWEDZI $394,029 € 360,000 £ 305,405
PER VHIKI $98,490 € 90,000 £ 76,351
PAZUVA $14,069 € 12,857 £ 10,908
PER HURE $586 € 536 £ 455
paminiti $9.76 € 8.9 £ 7.58
PER Wechipiri $0.16 € 0.15 £ 0.13
Pano, isu tinowedzera mubairo waDuvan Zapata sekondi yega yega. Uku ndiko kuwanda kwemari yaakawana kubva pawanga uchiona iyi Peji.
Kana iyo nhamba iri pamusoro isingawedzere, zvinoreva kuti uri kuona kubva kune Peji reAmP. ikozvino Click HERE kuti uone mibairo yaZapata muhomwe pasekondi. Waizviziva here? Izvo zvinotora mushandi wepakati muEurope angangoita makore masere matanhatu kuti awane zvakafanana The Big Panther inowana mumwedzi mumwe chete.
Chokwadi # 2: Chitendero: Sekureva kwemishumo, zvinogona kuti vabereki vaDavan Zapata vakamurera mukutevedzera chitendero chechikatorike. Iwe, munhu anorova, kwete muhombe pachinamato asi wakamboonekwa kune chechi yekatorike (ona pazasi). Kukura uku kunopa kutenda kune mukana wekuti Duvan ave muKristu uye anodzidzira Katolika.
Chitendero chaDuvan Zapata- Hapana kuramba chokwadi chekuti mutendi. Mufananidzo Wemifananidzo: Instagram.
Ichokwadi # 3: Duvan Zapata Tattoo Fact: se Donyell Malen, Samuel Chukwueze, Luis Muriel uye Krzysztof Piatek, Duvan Zapata haana hunyanzvi hwekuita muviri panguva yekunyora kana mafeni haana tattoos ake. Ari kutarisisa pakuvandudza muviri wake, kusasimba uye pamwe nekukwirira kweanoshanda uye anoshanda maair duels.
Pikicha chiratidzo chekuti haana ma tattoo panguva yekunyora. Mufananidzo Wemifananidzo: WTfoot.
Ichokwadi # 4: Duvan Zapata FIFA chiyero: Unoziva here kuti Duvan Zapata ane huwandu hwese hweFIFA hwe83 panguva yekunyora. Kunyangwe zviyereso zvake zvakasangana nekukwira kwemuchadenga munguva pfupi yadarika, hapana kuramba chokwadi chekuti mangoda makumi mapfumbamwe nemaviri anokwezva kune veFIFA vekufarira basa vanoshuvira combo yepedyo yeunyanzvi.
Matanho ake ari kumusoro uye achikurumidza-kusimuka. Mufananidzo Chikwereti: SoFIFA.
Ichokwadi # 5: Duvan Zapata Pets: Kune vakawanda vakwikwidzi vane chinhu chemhuka kunyanya imbwa uye Duvan Zapata ndiye mumwe wavo! Muchokwadi, imbwa yake yakafanana nekuwedzera kune yake yepedyo mhuri sekuonekwa munzira iyo yaanowana iyo inoratidzwa mumifananidzo yemhuri.
Unoda mhuka dzinovaraidza saDuvan Zapata nemhuri yake here? Mufananidzo Wemifananidzo: Instagram.
Chokwadi # 6: Duvan Zapata Kusvuta uye Kunwa Chokwadi: Duvan Zapata haasi kupihwa kutora zvinwiwa zvakaoma, uye haana kana kuonekwa achifemera panguva yekunyora. Nemaitiro akadaro ane hutano, Duvan anojoinha ligi revatambi venhabvu vasina kurasa kukosha kwekugara uye kugara vakagwinya.
Duvan yekwaZapata Biography- Wiki Zivo Base
Muchikamu chino chekupedzisira cheDuvan Zapata Biography Chokwadi, iwe unosvika pakuona yedu Wiki yeruzivo. Inoratidzwa pazasi, inobatsira iwe kuwana ruzivo nezve munhu arikuramba nenzira yakapfupi uye yakapusa.
Duvan Zapata's Full name Duvan Esteban yekwaZapata Banguero
Duvan Zapata Zuva rekuzvarwa 1 yaApril 1991
Chizvarwa chaDuvan Zapata 28 (Kubva paFebruary 2020)
Duvan Zapata's Father's Father Luis Oliver yekwaZapata
Amai vaDuvan Zapata's Amai Elfa Cely Banguero (Mangwanani)
Duvan Zapata Nzvimbo yekuzvarwa Padilla, Cauca, Colombia
Hanzvadzi yaDuvan Zapata Cindy Carolina
Duous Zapata's Cousin Cristian Zapata
Chitendero chaDuvan Zapata Chikristu (Katolika)
Mukadzi waDuvan Zapata Nana Montano
Vana vaDuvan Zapata Dantzel (mwanasikana wake) uye Dayton (mwanakomana wake).
CHOKWADI CHINOGONA: Tinokutendai nekuverenga yedu yeDuvan Zapata Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi. At LifeBogger, tinoedza kururamisa uye kusasarura. Kana iwe ukawana chimwe chinhu chisingaratidzika sezvakanaka, tapota tigovera icho isu nekupindura pazasi. Isu tichagara tichikoshesa uye nekuremekedza mazano ako.